Manana fizarana marin-toerana aho, tontolon'ny birao milamina ary mankaleo | Avy amin'ny Linux
Ireo mpamaky izay miaraka aminay Avy amin'ny Linux hatramin'ny nanombohany (ary na dia ireo izay efa namaky ahy tamin'ny bilaogiko teo aloha aza) Azo antoka fa voamarikao fa ny ankamaroan'ny lahatsoratro dia torohevitra izay nampiasaina hamahana olana vitsivitsy sy sasany amin'ny fizarana ankafizinay, ny tontolo iainan'ny Desktop na ny fampiharana manokana.
Hatramin'ny nanombohako tamin'ny bilaogy teo aloha, nanoratra noho ny antony roa:
Mizara ny fahalalana azony isan'andro isan'andro.
Mamela karazana Memo izay hanampy ahy raha misy olana atrehiko.
Noho izany, azo antoka fa voamarikao fa tsy namoaka lahatsoratra an'ity karazana ity aho nandritra ny fotoana kelikely, izay saika nifandray tamin'ny fizarana lohateny: Debian.
Ary izany dia hoy ny lohatenin'ity lahatsoratra ity, Manana tontolon'ny birao milamina sy fizarana aho ary efa elaela aho no tsy nanana olana nahitako ny fanoratana sy ny fanazavako ny famahana azy, izay nahatonga ahy ho tonga mankaleo be ahy.
Ho an'ireo izay mbola tsy mahalala dia efa nampiasaiko Fitsapana i Debian amin'ny KDE 4.8 Roa volana lasa izay ary tokony hiteny aho fa tsy afaka ny ho sambatra kokoa amin'ny hevitro fa tsy misy fitarainana hataoko. Miasa tsara ny zava-drehetra, indraindray be loatra.
Mieritreritra ny hiverina any aho Xfce, ny latabako nandritra ny androm-piainako, fa maninona aho no handainga aminao? KDE nahasarika ahy izy ary tsy te hamela ahy handeha, manana ny zavatra ilaiko rehetra aho: Fitaovana sy fampiharana lehibe, fampisehoana tsara, na izany aza.
Saingy toa tsy izaho irery no mahatsiaro mahazo aina GNU / Linux. Misy lahatsoratra vitsy sy vitsy ao amin'ny RSS misy ahy mifandraika amin'ny "famahana olana" na "fanombohana zavatra iray" amin'ny fizarana isan-karazany. Mety ho an'ny rehetra ve izany GNU / Linux mandeha tsara ve? Eny, tsy tokony hatao amin'ny ankapobeny, tsy nilaza aho hoe "Rehetra" fa "Ny ankamaroany".
Na izany na tsy izany, heveriko fa ny Linuxsphere Somary milamina izy ary misy antony ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fisehoana / personalization » Manana fizarana marin-toerana aho, tontolon'ny birao milamina ary mankaleo ahy
Teny mitovy amin'ny Slackware 14 + KDE 4.8.5, fa rehefa nampiasa Slackware-current aho dia tantara hafa izany.
Salama, tsy nampiasa mihitsy aho izao ary liana amin'ny zavatra niainanao aho, azonao atao ve ny mamelabelatra?
Jereo, ao amin'ny bilaogiko, misy fanamarihana vitsivitsy avy nampiasako ny ankehitriny tamin'ny 13.37 fa tsy mampanantena zavatra lalina momba izany aho.
Ary hamelabelatra ny inona, azafady fa tsy azoko?
Fantatro ny bilaoginao, izao vao namaky ny nick anao aho dia tonga saina! Congratz, tena tiako ilay izy, misy fitaovana kamo miadana ary mampiseho fa fantatrao ilay distro 🙂
Mikasika ny famelabelarana dia nihinana ny antsasaky ny fehezan-teny xD aho
"[…] Afaka manoratra lahatsoratra ve ianao?"
Toe-javatra mitovy, fahatsapana hafa. Herintaona miaraka amina duo mitovy (Arch + LXDE) ary tsy te hiala eto akory aho. Inona no mampalahelo ahy dia mieritreritra ny hiverina hopping distro.
Toy ny saka aho: raha vao hitako ny toerana keliko dia tsy ilaozako mandra-pandroakan'izy ireo ahy. xD
Rehefa mivoaka i Wheezy dia hahafinaritra anao ny manatrika fitsapana ……………… ..ah, iza no hataoko zaza. Nianatra niatrika sisin-dàlana kely aho izao ……. Ny mitranga dia satria te hanana distro marimaritra iraisana amin'ny asa aho dia tsy manalavitra ny tenako amin'i Debian.
Na dia ao amin'ny Arch aza ny zavatra milamina, noho izany dia faly aho tamin'ny fanavaozam-baovao rehefa nifindra tany amin'ny systemd ...
Nesorinao ny vavako.
Ny fitoniana ve no ambaran'ny tafio-drivotra? Raha ny tokony ho izy dia mino aho fa ity fotoan'ny fandriam-pahalemana ity dia noho ny fisian'ilay ady an-trano, indrindra fa ilay antsoina hoe cloud-computing sy izay mifandraika amin'ny telefaona sy fitaovana vaovao.
Saingy, amin'ity taona ity dia heveriko fa hanana qt5 miaraka amin'ny kde5 isika ary misy koa video any misy santionany amin'ny fandrosoana miaraka amin'ny wayland. Manantena aho fa tsy tara loatra ny fampiharana ny wayland, alohan'ny lany PC desktop.
Ary omeo azy "faranana ny PC desktop" Tena mividy an'io tantara io ve izy ireo? Manelingelina ahy aza ny hanazava ny antony tsy hitrangan'izany.
Mazava ho azy, PC PC biraonao dia tsy halaina an-keriny na hosakanana, fa farafaharatsiny any Espana ny vidin'ny solosaina PC sy solosaina finday dia midina isam-bolana raha miakatra kosa ireo finday avo lenta, fahitalavitra fahita ary takelaka. Ary noho ny antony mazava. Ny solosaina finday dia mandeha 400 euro ary pc avy amin'ny 250 + ny monitor. Misy takelaka avy amin'ny 70 euro izay tokony hijerena, hanokafana mailaka, Facebook ary hiresahana dia mendrika be dia be. Ny vidin'ny tv smart isan'andro dia mitovy amin'ny fahita fahita amin'ny fahitalavitra lcd mahazatra, maninona no te hanana fitaovam-piadiana ao amin'ny efitranonao na mitondra solosaina finday lafo vidy na milanja 2 kilao? Ny smartphone dia omena vola na omen'ny orinasa telefaona anao. Ary izany dia tsy eo amin'ny "parisos kapitalista" ihany no mitranga. Nandeha namakivaky an'i Iran aho roa volana lasa izay ary tsy nitsahatra ny tsy gaga aho nahita ireo tanora rehetra manana tabilao sy fakan-tsarimihetsika sinoa an'ny Samsung Galaxy.
Ary mazava ho azy fa amin'ny ambaratonga matihanina sasany dia mila pcs mandritra ny androm-piainany izy ireo. Tsy azoko an-tsaina ny studio fandraisam-peo mifangaro amin'ny takelaka na fanitsiana horonantsary na ireo asa rehetra mitaky herin'ny processeur miaraka amin'ny kitendry, totozy ary periferal. Angamba ilay teny hoe "manjavona" dia mahery vaika fa mazava ho azy fa ny birao birao mahazatra dia hijanona tsy hanan-danja amin'ny ankamaroan'ny mpampiasa tsy manam-pahaizana manokana.
Lavo ny varotra PC satria efa samy manana ny iray, ary hiantoka ny fampiasana azy ireo izy ireo, satria tsy misy mahasolo solosaina finday na tablette ny PC.
Fanjohian-kevitra tsotra sy marina. Eny, tsy "hamongotra" ny PC desktop mihitsy izy ireo satria hisy iray, fara fahakeliny, ao amin'ny tranombakoka na ao an-tranoko. XD
Toy izany koa no nitranga tamiko 🙂
Ka tsy diso tanteraka aho, sa tsy izany? Milamina ve ny GNU / Linux? Tsy an'ny diooosss !! Miverina amin'ny Windows aho avy eo hahaha
Raha te handany ora (na andro, na herinandro ...) ianao amin'ny fahafinaretana dia atoro anao ny Windows 8, mahafinaritra izany. Raha fantatro fa nividy ny fahazoan-dàlana Pro x64 aho, hahaha. #ReturnMeMyMoney
Hmmmm bibikely vaovao mivoaka avy ao amin'ny lafaoro ho an'ny aretin'andoha be mpamorona sy ho an'ny mpihaino rehetra. Angamba rahampitso hitranga amiko hehe. Nilaza izy ireo fa ny tena mahafinaritra indrindra dia ny fitsabahana matotra rehefa mandefa fampiharana amin'ny efijery feno miaraka amin'ny menio fanombohana vaovao.
Nah, ho an'ny zazakely izany. Ny tena fahafinaretana dia ny faharanitan-tsaina namboarina izay mamantatra rehefa manana asa mandreraka mandritra ny ora maro ianao ary mamporisika anao hiala sasatra amin'ny alalàn'ny tenanao BSOD miaraka amina endrika maoderina UI madio sy tsotra, ary ny mpamosavy manamarina ny famosaviana izay mila adiny 3 holazaina anao daholo ny zava-drehetra lasa any amin'ny helo ary mila mamerina na mamerina mametraka ilay rafitra ianao. Ary izay mitranga aminao tsy indray mandeha, fa indroa, dia mampiala voly tokoa ka saika henonao ny fihomehezan'ireo tompon'ny Microsoft mizara ny hafalianao.
Tiako ny maneso ny hevitrao, hehe. Ny mahaliana dia fantatro ihany koa ny Windows 8 nandritra ny andro vitsivitsy mba tsy hoso-doko (ary afaka mankafy lalao vitsivitsy), ary na dia tsy sendra lesoka karazana BSOD aza aho dia tsy mankaleo miady amin'ny Metro interface tsara, na dia lazaiko marina aza fa aleoko ny mifaly amin'ny zavatra mamokatra bebe kokoa. Etsy an-danin'izany, misy ny fampiharana antsoina hoe StartIsBack izay manampy ny menio fanombohana indray ary mamela ny fanilihana ny zoro mafana sy ny bara firma, misaotra izay nitondran'i Windows tamin'ny fomba nitovy tamin'ny teo aloha. Tsy haiko ny fomba fiasan'ny Windows 8 amin'ny takelaka ARM, fa farafaharatsiny ao amin'ny kinikany ho an'ny PC, ohatra tsara amin'ny tsy fanaovana interface-n'ny mpampiasa io; Ny fampisehoana dia fifangaroan'ny hybrid tsy mifanaraka, ary koa ireo zavatra izay natao mora natao dia takona ankehitriny. Raha tsy mino ahy ianao dia andramo amin'ny fomba azo antoka.
Rehefa lasa mora ampiasaina Linux, dia ara-dalàna ny fisian'ny matihanina IT maro kokoa mifindra amin'ity rafitra ity ary izany dia miteraka fanatsarana azy. Izaho manokana dia tsy tiako ny fifidianan'ny fonosana Ubuntu, na ny politikan'ny andaniny sy ny ankilany (ampitahaina amin'i Debian), saingy tsy maintsy ekena fa io fizarana io dia nisy akony lehibe tamin'ny fanatsarana ny Linux mivantana sy ankolaka (ireo distros hafa voatery niady mafy hanao) . Ary ny fahitako azy dia ny Android koa dia nisy fiatraikany lehibe tamin'ny fomba fijery ankapobeny momba io kernel io.
@Hugo: Mahagaga fa tsy nampiasa azy io tamin'ny vakansy rehetra aho ary izao niverina tany amin'ny birao dia mandeha tsara izao. Tsy misy lagy, tsy misy hatsiaka, tsy misy BSOD, tsy misy mihitsy. Saika hanova azy io ho an'ny Windows 7 aho fa mikasa ny hanome azy fotoana iray hafa hijerena raha toa ka mihetsika ity indray mitoraka ity - ankoatry ny famolavolana dia kamo aho. xD
Ny interface UI maoderina dia tsy nahatezitra ahy velively; ny mifanohitra amin'izay no izy dia tiako hatramin'ny nanambaran'ny Microsoft tamin'ny 2011 fa hampiditra azy ny Windows 8, ary raha nividy ny kinova farany aho dia noho izy io no nahatonga izany (rehefa nampiasa ny Windows 8 hatramin'ny nanamboaran'ny Preview Developer) izany. tsotra kokoa noho ny Windows mahazatra.
Mazava ho azy, ny fahatsorana be loatra an'ny programa UI Maoderina izay tapaka matetika loatra noho ny fahatsorana hany ka mijanona ho toy ny kilalao fotsiny izy ireo izay tsy misy asa na safidy azo atao hafa, ary halako izany.
haha Izaho koa nividy licence ary izao tsy manana olana. Mazava ho azy, efa ananako feno banga, fa izany dia mitranga amiko amin'ny rafitra rehetra 🙁
Milamina koa i Arch. SORATRA IZAO FA MAHATSANGANA NY ZAVATRA REHETRA ¬¬
Vaguito dia hoy izy:
Naaa, manana olana Windows 8 x64 sy 0 aho amin'izao fotoana izao, ny BSOD tokana dia noho ny OC tsy mitombina (xD) sy ny tabilaon'ny wifi izay nanana mpamily taloha be, izay efa manana ny kinova ho an'ny W8.
Mbola mahatoky amin'i Debian ihany aho 🙂
Mamaly an'i Vaguito
Toy izany koa, tsy maintsy avelanao handalo fotoana bebe kokoa ianao, dia toy ny mitranga amin'ireo kinova Linux distro vaovao, aretin'andoha izy ireo amin'ny voalohany, miaraka amin'ny tsy fitovizanao amin'ny Win8. Nametraka azy nandritra ny iray volana sy sasany aho, ary omaly namerina an'i Win7 tao amin'ny solosaina findainy, satria nanomboka nahita tsy fahombiazana aho nandritra ny efatra andro, indrindra ny tamba-jotra, izay nanjary lasa miadana be tampoka, raha fintinina, ireo zavatra miaraka amin'i Fedora sy Win7 tsy hitranga amiko izany, ka tazomiko mandra-pivoarako, enim-bolana, amin'ny fanantenana be dia be?
Mahafinaritra ny mahita ireo mpampiasa Linux tsy dia manaitaitra sy tsy menatra ny mitafy ny sary famantarana Windows ao anaty hevitra. Ny zavatra niainako Windows 8 dia fohy dia fohy toy ny Metro, ny tiako holazaina dia ny menio fanombohana, nanome olana kely tamiko tamin'ny GTA San Andreas satria tena nanelingelina ny lalao izany. Ny nanondro tampoka ny ankavia tamin'ny lalao dia naneho ahy ny fanombohana tamin'ny famahana ny 800 × 600, izay ny lalao. Ao ny zavatra niainako fohy niaraka tamin'i Windows taorian'ny farany niaraka tamin'i XP XD. Salama.
"Mahafinaritra ny mahita ireo mpampiasa Linux tsy mana-panatika." Ny tiana holazaina dia, @Blaire Pascal, fa rehefa nandeha ny fotoana sy ny traikefa dia nanjary azo ampiharina kokoa aho amin'ity. ny zava-drehetra amin'ny toerany, ho ahy, ny toeran'ny Linux dia ny Desktop, ary ho an'ny Laptop Windows 7, satria ny fitantanana herinaratra an'ity farany ity dia tena tsara, ary OS tsara ihany koa. Raha ny resaka herinaratra Win8 dia mbola tsara kokoa, saingy amin'izao fotoana izao, araka ny nolazaiko, dia "stanby".
Linux, tao anatin'ny herintaona latsaka dia "mitsako" ara-bakiteny ny baterian'ny laptop-ko taloha. Ny bateria iray ho an'ny Acer dia mitentina eo amin'ny US $ 160, ary hampiatoana azy amin'ny famerana ny fanafarana any Arzantina, tsy azoko atao na aiza na aiza. Amin'izao miaraka amin'i Lenovo izao dia tsy hitranga amiko izany, koa nifindra tany amin'ny birao i Fedora malalako, izay afaka mandany izay tiany nefa tsy mandratra ahy. Izay karazana fanatisme izay apetrako efa ela be izay.
Tsy ho ara-dalàna ve ny hieritreretana fa nidina tsy mandeha ny bateria ao amin'ny masininao?
Novidiko ny solosainako (HP dv7-4287cl) tamin'ny Jolay 2011 ary afa-tsy ny roa volana fohy amin'ny fampiasana Ubuntu ho an'ny asa eo am-pianarana hametraka Arch amin'ny rafitra video hybrid, ny sisa amin'ny fotoana nanatanterahana ny Arch Linux x86_64 Ary androany ny batterie dia manana ny fahita matetika sy ny ranomaso tamin'ny fampiasako azy, vao mainka aho afaka milaza fa mitazona am-boninahitra tokoa izy io noho ireo fiovana nataoko tamin'ny rafitra, androany dia manana faharetana eo ho eo ~ 3 ora mampiasa KDE, 3: 30hs raha mampiasa Awesome na dwm aho, izay miresaka tsara momba ny fanjifana ny KDE (tena kely ho an'ny rafitra lehibe sy sarotra toy izany) ary ny rafitra fiasa napetrako hatramin'ny Ubuntu 11.04 na 11.10 izay I nampiasaina tamin'io fotoana io dia nihinana ny bateria tamin'ny 2:45 maraina ary tao amin'ny Windows dia tsy fantatro hoe hafiriana no naharetan'izany hatramin'ny zavatra voalohany nataoko, MAFY, dia ny fanaovana shit ireo fizarana voalohany niarahan'ny HD .
Fijaliana lehibe iray mankany Windows ary iray hafa ho an'ny HP noho ny fomba fanao tsy etika.
Tsia, ny baterian'ny Acer miaraka amin'ny Win7 dia naharitra efa ho 4 1/2 ora aho, ary ny Linux dia tsy nahatratra adiny 3 akory. Adiny iray sy sasany lava no mahatonga ny fahasamihafana (farafaharatsiny ho ahy), ary misy ihany koa ny tsingerin'ny fihenam-bidy vitsy kokoa, izay miteraka fiainana bateria bebe kokoa. Ny Lenovo izay ananako izao dia tonga miaraka amina rindrambaiko ahafahanao manamboatra fa mihena hatramin'ny 50% ny vidin'ny bateria raha ampiasainao mifandray amin'ny ankehitriny izany.
Mety hiteny amiko ny sasany hoe "dia aza ampiasaina amin'ny bateria raha toa ka hiditra ao ianao." Famonoan-tena izany, lazao amiko izay hanjo anao raha mahazo herinaratra ianao nefa tsy apetraka ny bateria.
Tokony hanandrana RAZOR-QT ianao, alohan'ny hihodinana mankany XFCE.
RAZOR-QT tamiko dia toa haingana kokoa noho ny KDE ary ny zavatra tena mahaliana, tsy mamela ahy tsy hahita azy io aho.
Mbola mitady zavatra nataoko tamin'ny KDE izay tsy azoko atao amin'ny RAZOR-QT aho.
Na izany na tsy izany dia tsy mahay mampiasa Debian Testing aho ary mahatsapa fa "ao an-trano", ka izany no antony anelezana ahy indrindra dia KUBUNTU.
Ary iza amin'ny Distro no atoronao miaraka amin'ny RazorQt na ny pro RazorQt?
Sa iza no ampiasainao? Heveriko fa marina teto fa nahita lahatsoratra momba an'io aho.
Eny, hitako izao, Slitaz niaraka tamin'i RazorQt io: https://blog.desdelinux.net/slitaz-razorqt-un-nuevo-sabor-de-slitaz-con-qt/
ppsalama dia hoy izy:
Izaho dia niaraka tamin'ny andohalambo sy kde nandritra ny herintaona sy 13 andro, ary na dia sendran'ny aretim-po aza aho indraindray dia nankaleo nandritra ny fotoana vitsivitsy hahaha.
Ny hany fihetseham-po "mahery" dia ny fametrahana ubuntu ho an'ny rafozam-baviko izay "naka fanahy" ahy saingy izany ihany.
Fahasamihafana be ka navoakako sy namaka ny findaiko. Ary inona izao no ataoko? hahaha
Hmmm, tsy mankaleo mihitsy aho, satria na dia miasa fahagagana aza ny Arch miaraka amin'ny KDE 4.9.5, dia mitady zavatra hatao foana aho. Ohatra, efa ela aho no te-hifindra monina ny latabatra fisaratsarahana MS-DOS aka MBR ho an'ny GUID aka GPT, saingy satria nanazava fomba iray hanovana ny latabatra ny Arch Wiki nefa tsy nisaraka intsony ary tsy namoy angona dia nanao ny mifanohitra tanteraka amin'izany aho . Nanohana ny angon-drakitra nataoko aho ary nanoratra indray ny latabatra fizarako ary nametraka indray ny Arch tamin'ny gdisk iray toy izany izay nitondra narary nify be tamiko rehefa nisaraka. Ary eto aho, manadino tsara ireo antsipiriany farany hanombohana mampiasa Archlinux (satria fialan-tsasatra fotsiny aho) fanindroany. Angamba indray andro any hametraka Gentoo aho. Amin'izao fotoana izao Arch dia tsy mikasika izany aho ary miverina amin'ny milina virtoaly, izay ananako LFS amin'ny antsasaky hazo hehe. Salam…
Ditto, 4.9.5 ao amin'ny Arch ary miasa tsara be izy.
Tsy maintsy miandry ny fanavaozana an'i Xorg isika. Mampihomehy ny isa 0 an'i Kde amin'ny ankapobeny 😛
Toy ny mahita fomba foana hanapotehana ny rafiko aho, dia fanomezana izany. Nanomboka nampiasa linux aho noho izany antony izany, mba tsy hikorontana ny fametrahana windows ny rahalahiko mahantra.
Mampihomehy ny dikan'ny fanomezanao, hehehe. Ka ianao dia toy ny Mpanjaka Midas, fa mihemotra, marina? 😉
Amin'ny fomba Elav, tsy misy afaka mamaky ny lahatsoratra voasivana amin'ny fisamborana lol.
Hahaha .. raha afaka mamaky azy ianao, fa mba hanome azy tohiny bebe kokoa drama
Mikasa ny fametrahana ny…
Izay no azoko vakina
Hatao izy io satria mampiasa ny mpanonta printy tsara ianao any amin'ny toerana onenanao, satria misy toerana tokony hanananao manam-pahaizana manokana amin'ny famoahana lahatsoratra tsy azo vakina "decrypting".
Mianiana aho fa ny tsy anananao dia i Yamilka sy PEPE ...
Hahahaha, ñooooo, saika Hugo ... Mahaliana tokoa, tsy fantatro fa mety ho lasa karazana Enigma io hahaha.
Ka androany aho nanapa-kevitra ny hamafa ny Windows XP taloha amin'ny Netbook (toa tsy mety maty) ary hametraka Bodhi Linux ao aminy.
Manaiky tanteraka. Miaraka amin'ny OpenSuse in Tumbleweed dia faly aho noho ny fitoniana sy ny fanavaozana tsara. Miasa tsara sy milamina izy ka mankaleo. Na dia heveriko ho tsara kokoa aza ity… 😉
Eny, mitaingina ny bisikileta aho, zavatra mitovy amiko no mitranga amiko amin'ny Arch + KDE, milamina tokoa ary mandeha tsara izy ka hitako fa mankaleo, xd ... Soa ihany fa manana milina virtoaly ho antsika izay tratry ny distroitis jeeje ...
Miezaha mametraka ireo mpamily ATI farany teo amin'ny Gentoo (raha ny amiko Sabayon) miaraka amin'ny kernel> 3.4 izay hanaisotra ny havizanao 😛
Lohahevitra tsy mandeha: Efa manana forum ve isika tsy misy spam? Vao niditra aho ary tsy hita intsony ny hafatra fitsapana anti-spam ...
mirantra dia hoy izy:
Tiako ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny fatra mety ...
Mamaly an'i mirantra
Ho ahy, niverina tany andohalambo aho ary miverina mieritreritra fa malahelo zavatra be dia be aho ary xfce tsy ovako na inona na inona, arahabaina Ariki
Tahaka ny ankamaroanareo, hitako fa tao anatin'io toe-javatra io ihany. Manana Arch miaraka amin'i Gnome Shell aho ary mahafinaritra ny zavatra rehetra ary PC hafa fa miaraka amin'ny XFCE. Ny marina dia raha malahelo kely aho manana olana kely. Nahita fret taloha (PC PIII) aho ary hanandrana amin'ny Arch sy E17 ary holazaiko anao ny zava-mitranga.
Tsy azoko ny olona tsy te hilamina ny rafitr'izy ireo satria mankaleo azy ireo. Tsy misy zavatra hadihadiana sy ezahinao hampifaliana ny tenanao sy hianaranao zava-baovao. Ohatra, azonao atao ny mametraka Linux From Scratch tahaka ny ataoko. Ka azonao antoka fa tsy mankaleo. 🙂
Izaho dia ao anatin'ny toe-javatra mifanohitra tanteraka, miverina amin'ny Linux tsy tapaka aho (nanana distro foana aho fa noho ny lalao saika natomboka foana i Windows) ary ankehitriny amin'ny roa amin'ireo solosaina telo ananako dia manana Linux aho, iray ho mpizara ary amin'ny alàlan'ny baiko (Ubuntu Server 12.04) izay mbola betsaka ny zavatra tokony hataoko ary birao iray hafa ho an'ny solosaina desktop (Mint 14 Cinnamon), ary ao no ahitako ny fianakaviana mety (Debian sy ny derivatives) fa tsy ny tontolon'ny birao izay mameno tiako ny niverina tany amin'ny Gnome 2.2x taona lasa izay.
Raha ny marina, mandefa izao avy amin'ny Windows 7 aho, saingy ny fiheverana hoe niditra tao amin'ny solosaina finday ilay fahazoan-dàlana ary mety amiko ny mikitika ny andaniny roa amin'ny rindrambaiko…. Aorian'izay dia ho hitantsika raha hitahiry izany aho, na dia eo am-piasana aza dia mila manatsara ny fahaizako amin'ny programa Microsoft sasany.
Oo "programa Microsoft sasany" ??? Tsy fantatro ny lafiny Microsoft XD. Lainga izany, mitranga amintsika rehetra fa amin'ny fotoana sasany amin'ny fiainantsika dia tsy maintsy mampiasa rindrambaiko Windows toy ny Autocad, CorelDraw na Photoshop na inona na inona.
Eny, amin'ity tranga ity dia midika hoe ny suite an'ny Office aho, dia izany tokoa. Tsy mampiasa na inona na inona amin'ny alàlan'ny famolavolana aho, ny Gimp malalako ihany, na amin'ny Linux na Windows.
Hehe, raha marina ny Microsoft Office. Adinoko tanteraka izany.
Tena mankaleo Linux, miaraka amin'ny Windows dia nandinika foana aho tamin'ny Panda Online, Malwarebytes, spybot, spyware tsy haiko hoe ... ary rehefa nahita zavatra ianao dia efa nampiala voly anao nandritra ny fotoana kelikely. Avy eo defragmenting, mandalo ny TuneUP ...
Eny, adventurous izany.
[Windows Trolling tsara indrindra hatrizay, toerana voalohany !!! ]
Efa niaraka tamin'ny Arch malalako sy XFCE 4.10 aho nandritra ny volana vitsivitsy, napetrako izao ny Compiz (eny an-dalana, tsy afaka mametraka ambadika hafa amin'ny birao tsirairay ianao), conky, ary cairo-dock (tsy misy vokany be loatra be dia be, ampiasaiko fotsiny ho toy ny dock application launcher), miaraka amin'izany rehetra izany ary ny p4 malalako tsy misy HT, manana rafitra tsara indrindra aho raha tsy misy zava-dratsy ary tsara imasom-bolo, ankehitriny dia mahazo aina amin'ny fandaharako firaketana maotina amin'ny fananana mifindra amin'ny django. Salama.
hahahaha, teny an-dàlana no nanehoako hevitra fa ny zavatra nolazainao Rubén dia nampihomehy ahy… ary raha toa ka odyssey izany manenjika zavatra ao anaty winbugs.
Raha ny fomba hafa dia nankaleo aho tamin'ny andro hafa (miorina tsara ny beta amin'ny fanabeazana fototra) ary nametraka e17 tamin'ny ubuntu. Ny marina dia tena tsara izy io, haingana ary misy vokany lehibe nefa tsy milamina. Tsy maintsy hiandry ela kokoa isika, satria toa tontolo iainana tena tsara. Izy io koa dia nampiasa ondrilahy 44 MB niaraka tamin'ny mpitantana ny fikandrana, tontonana ary fitetezana rakitra 😀
Izaho koa dia mitovy. Manana ny fitsapana an'i Debian miaraka amin'ny Gnome-shell aho ary nahavita mankaleo tsara. Fiarahabana avy any Kolombia.
Raha hilaza ny marina.. isika rehetra dia (mametraka ny olona ao anaty kitapo iray ihany) miandry zavatra hitranga izay manasarotra ny fiainantsika kely .. ..ary izay resahina amin'ny vondrom-piarahamonina rehetra .. .. Mandresy i Linux antsika tokoa miaraka amin'ny fahamarinan-toerana mampino ..
OT: Na dia mahafinaritra ahy aza ny mandamina ny ArchLinux + Openbox + PyTyle napetraka tato ho ato ... misaotra izay tsy mila mampiasa ny totozy intsony .. 😀
Ary na dia efa misy lahatsoratra vitsivitsy aza ao amin'ny tranonkala momba ireo vondrom-piarahamonina ireo ... afaka nanoratra tamim-pifaliana ho an'ny DesdeLinux momba ny fizotrako aho ..
Misy foana ny zavatra ianarana .. .. ny ampahany sarotra dia ny fahalalana izay tianao hanombohana .. 😉
Ankehitriny dia mifantoka amin'ny fahitana ny fahafantarako tanteraka distro Linux aho ary atsaharo ny fitsambikinana satria talohan'ny nahatongavako dia nankany amin'ny distro hafa aho, angamba ho an'ny lohahevitra tsara tarehy kokoa noho ilay iray, sns, sns. Ankehitriny dia nisafidy an'i Debian aho ary mandehandeha manova birao ary mianatra kely ny fomba hanaovana azy amin'ny tanana ary ambonin'izany rehetra izany mba hahazoana sy hankafizako ny fitoniana voalaza distro.
Mandritra izany fotoana izany, afaka mitazona hatrany ny saintsika amin'ny tontolon'ny loharano misokatra amin'ny alàlan'ny safidy hafa.
Tsotra ny valiny: Arch ...
Blair, efa nivadika ho andohalambo ve ianao?
Ie. Efa niova aho. Ankehitriny dia tsy manana afa-tsy Linux roa aho amin'ireo fizarana roa lehibe ananako, Arch sy Fedora. Ary fizara fanampiny ho an'ny fitsapana.
Raha ny ahy dia mikasa ny hanao onja aho dia hifindra avy any Ubuntu mankany Manjaro aho ... andao jerena izay mitranga 🙂
Amin'ny fotoana tsara amin'izay!… Nianatra niaraka tamin'i Arch aho nandritra ny volana vitsivitsy ary nifankatia tanteraka aho. 🙂
Mandrel dia hoy izy:
Manana Mandriva 2010 aho ary mandeha tsara, olana aotra !! amin'ny fomba andrasako ny andiany manaraka an'ny Mandriva (OpenMandriva) 2013
Mamaly an'i Mandrivero
Eny ... ho ahy, 2012 dia taona nanandrana sy nanandrana ary nanandrana fotsiny ary tsy nisy distro mety, rehefa nieritreritra aho fa nijanona tao amin'ny iray dia nanandrana nanandrana iray hafa aho, noho ny fahalianana tsotra ary ny sasany dia namoaka azy avy hatrany sy ny hafa dia nanandrana azy ireo nandritra ny andro vitsivitsy aho, saingy mieritreritra aho fa manomboka amin'ny 2013 raha "nifankatia" tamin'i Netrunner aho, dia toy ny hoe namaky ny saiko izy ireo ary namolavola izany ho an'ny tiako sy ho an'ny laptop-ko.
Andriamanitra… izany koa no nanjo ahy niaraka tamin'i Manjaro… Tena mahazo aina aho ka lasa mankaleo be; Soa ihany aho fa amin'ny fotoan'ny fanadinana izao, raha tsy ...
Izaho dia tao amin'ny Arch nandritra ny fotoana ela, nandao an'i Debian aho satria leo xD Voalohany miaraka amin'i Xfce, miaraka amin'ny Openbox mahafinaritra izao. Izay holazaina dia tsy mahita zavatra mahaliana intsony aho. Nieritreritra ny hanandrana distro sasany aho, angamba BSD sasany, nefa sendra tsy manam-potoana aho izao.
Heveriko ihany koa fa nilamina tsara ny atmosfera Linuxera ... tsara ...
Amin'ny traikefa nahafinaritra sy fianarana feno ka tsy lany andro xD
Marina fa tsy miova aho satria toa nankaleo aho dia nanandrana nametraka ny KDE ho an'ny debianako izao, samy manana ny LXDE sy ny KDE aho, fa raha vao tsara ny zava-drehetra dia nankaleo aho ary nanomboka namaky pdf momba ny fiarovana ny solosaina.
Hehehehejhehehe, zavatra mitovy amiko no mitranga amin'ny fanandramana debian, mankaleo be aho ka nanapa-kevitra ny hametraka debian sid amin'ny milina virtoaly, mba hahitako hoe tsy mitombina izany.
Bonafacio dia hoy izy:
Tokony hivoaka ny trano ianao.
Mamaly an'i Bonafacio
Ha! Mora ny fahitanao azy, fa amin'ny masoko dia tsy mitovy ny zava-drehetra. 🙂
Andro vitsy lasa izay dia nanana ny olako voalohany tamin'ny taona tao anaty masinina kely izay navotako (celeron 1100) niaraka tamin'i Slitaz, rehefa avy nandrahoina tsara aho dia nanomboka nihena ny fizarazaran-trano mba hanome toerana ho an'ny Swap (hadinoko! ), maty GParted, nifarana ratsy ny zava-drehetra, tsy azoko ny nametaka ny fizarazaranana, tao anatin'ny folo minitra dia nahita ny vahaolana aho, mk2fs tsotra -S / dev / hda2 ary fanafody masina, naharitra kely ny fahafinaretana, namaky kely momba ny ext / 2/3/4 efa voalaza io. Amin'ny lafiny iray amin'ny milina lehibe, miaraka amin'ny Chakra sy Ubuntu dia mankaleo ahy toy ny holatra 🙂
Che, azontsika atao ny manararaotra ny fitoniana hisarihana ireo mpampiasa tsy dia mandroso loatra, sa tsy izany? Ny fahamarinan-toerana amin'ny linux dia ahafahako mampiseho amin'ny hafa mora kokoa amin'ny fomba tsara sy tsotra ary azo ampiharina ny fampiasana linux. Raha tsy izany dia hahita olana lehibe ianao amin'izany. Omaly dia nampahafantariko namana iray hafa izy. Ny iray hafa ary manohy manisa izahay.
Io no ezahantsika hatrizay, na dia nivily lalana tsy hiala amin'ny tanjona aza isika 😀
Tany Manjaro aho, nalaina avy tamin'ny Arch, ary ny marina dia manana olana 0 aho.
Ny valin'ny antony nahasosotra anao tamin'ny fitsapana nandritra ny roa volana dia hita ao amin'ny http://bugs.debian.org/release-critical/
Aza adino ihany koa fa ny fanandramana dia nanjary hatry ny ela niaraka tamin'ny fikasana ny hiorina amin'ny volana feb. Izany no mahatonga anao saika tsy misy fanavaozana ary mankaleo ianao. Manoro hevitra an'i Sid aho fa ny marina, ho tsy milamina dia miorina tsara kokoa noho ny Testing ary indraindray noho ny Stable, fa manana ny zavatra kely ihany koa hampifaly anao. Na tsara aza, resaka tsiro izany.
Vokatr'ity lahatsoratra mankaleo ity dia tadidiko (ary hitako tamin'ny tantarako fa tsy dia tsara loatra ny fahatsiarovako azy) rehefa tamin'ny volana jolay tamin'ny taon-dasa aho dia nifandona tamin'ny fanohanana maritrano marobe an'i Debian, izay nolazainao tamiko tao amin'ny Twitter: « Debian Sid? Tsy mahagaga raha sendra anao ireo zavatra ireo. Ny soso-kevitro: miverena amin'ny fitsapana. » Hahaha. Manoro hevitra anao aho izao: «Mitady hetsika ve ianao? Upgrade Sid !!! »
Raha mbola tsy nifindra tany amin'i Sid aho dia noho ny olan'ny repositories (zavatra fantatrao tsara ny fomba fiasa ao Cuba), fa matokia ahy, nalaim-panahy foana aho hampiasa azy io. Raha ny marina dia nanao izany aho indray mandeha, saingy tsy afaka nanaraka ny tahan'ny fanavaozana mivantana ny Internet.
Omaly alina aho dia nanapa-kevitra ny hanavao miaraka amin'ny sid ary hiverina hanao fitsapana ………………… mandra-pahatongan'ny fandosiran'ny sid !!!!!!! fonosana 3 fotsiny misy RC-bug ary 5 miankina amin'izy ireo. Fonosana 8 izay tsy mamporisika ahy hanavao ………… ..DE 150
Ampitaiko amin'ny Kubuntu 12.04 io ihany aho, tao amin'ilay distro aho nanomboka tamin'ny 11.10 ary efa mijanona ho OS ofisialin'ny masiniko, olana zero nandritra ny volana maro ary fahagagana amin'ny fampiasa sy ny fahombiazany amin'ny mpanao kafe, hitanao io. fa ny bandy KDE sy ny Bluesystems dia nandray an'io tamim-pahamatorana
Saingy angamba andro iray amin'ity andro ity aho dia hampifaly sy hanandrana an'i Sabayon, lohahevitra niandry efa ela ary hatramin'izao dia mbola tsy nanam-potoana hanandramana aho.
Tsy mankaleo aho manao programa miaraka amin'ny GtK 3.6 sy Vala.
Manampy amin'ny forum Gtk 3.6 sy Vala miaraka amin'ny sombin-kaody GUI aho, raha misy mila fanampiana.
Ao amin'ny vondrona LibreOffice aho. Fa voaloko aho. Nangataka tutorial aho hahafantarako ny fampiasana ny
Tranomboky VCL. Saingy ireo LibreOffice dia tsy manana tutorial, te-hanatsara ny endrik'i LibreOffice aho. Hojereko raha afaka mahazo zavatra amin'ny tranokala VCL ho an'ny GNU / LINUX aho.
Ny antony manosika dia manandrana mijery ny fomba hanatsarana ny lafiny sasany na ny antsipirian'ny programa sasany ao amin'ny GNU / LINUX. Mba handrosoana bebe kokoa ary andramo ny fahazoana vola kely avy amin'i Microsoft amin'ny PC desktop.
Tsara be 😀
Raha ny fanazavana, araka ny fahazoako azy, ireo apache dia mikasa ny hanova ny fisehoan'ny OpenOffice, angamba afaka mifampiresaka amin'izy ireo ianao.
Eny, ny marina dia tsy fantatro raha mankaleo ny tsy mikasika na inona na inona, fa tsy diso aho, manana fitsapana an'i Debian sy Arch aho, ary ao amin'ny Arch dia milamina tanteraka ny zava-drehetra
Ny sarin'ilay laptop dia efa sarotra tanterahina mba hahafantarana azy tsara
Toy izany koa aho, milamina ny fitsapana ahy + kde ka tsy nanan-tsafidy afa-tsy ny manomboka programa aho, arg!
Ny fialan-tsiny tonga lafatra nataoko dia vantany vao vita io olana kely ataoko io !! voafitaka amin'ny debian aho.
Ny tena marina dia tsy afaka nilaza izany ianao, tany Gentoo tany ivelany rehefa te hametraka zavatra na hafa ianao dia sendra olana vitsivitsy, saingy tsy misy azo vahana, avy eo tsy mbola niaina karazana loza aho nandritra ny fotoana ela: O
elav ianao no nitondra ny "maso ratsy" izao dia misy bibikely ao anaty kernel fa tsy azo ampiasaina ireo PC ary lasa mainty sy fotsy ireo mpanara-maso.
Hahahahaha .. hampifalifaly ny tenanao avy eo ..
aza mankaleo be, apetraho amin'ny tananao izay rehetra miainga ka hatramin'ny farany.
fohy ny fiainana, mandeha ny fotoana.
aza mandany fotoana sarobidy amin'ny zavatra tsy misy dikany, rehefa ilaina ny famahana zavatra matotra eny, manokana fotoana ho an'ny zava-dehibe
Azonao an-tsaina ve ny tenanao amin'ny 80? Hanohy ho mankaleo sy hikorontana amin'ny varavarankely, sary masina na tontolo iainana desktop ????
filankevitra: Carpe diem
Ahhhh, te-hanampy fotsiny aho: Mahafinaritra tokoa rehefa mahita ny distro amin'ny fiainanao ianao ary mahafeno ny fepetra ilaina hampiasaina amin'ny uni sy fahafaham-po azy ireo, raha ny amiko dia 2, Fedora sy Arch, fa Arch. .. tena nanintona ahy izany, tadidiko fony aho nieritreritra ny rafitra fandidiana idealy ho ahy; Tsy noheveriko fa ho tanteraka ...
Herintaona mahery mampiasa CentOS, sy ny marina…. Mankaleo aho fa tsy misy azo amboarina, ka indraindray dia mankafy ny tenako amin'ireo virtoaly aho hehe
Ny fanontaniana dia hoe: inona no tadiavintsika ny rafitra fiasa? ho fitaovana sa farany?
Valiny tamin'i Dexter
Ny rano milamina sy "tony" rehetra satria ny ekipa fampandrosoana dia manamafy amin'ny zavatra manokana, miompana amin'ny fampidirana tranonkala sy ny fitaovana.
Hey…. satria tsy misy atao ny tsirairay, haaa ... Ampio aho.
Tsy maintsy niditra tao amin'ny rakikirako hafa niaraka tamin'ny W $ aho hanovana horonantsary fohy 1080 tao amin'ny premiere al adobre.
Nampiasa ubuntu, u studio, mint, fedora aho ary izao andohalambo izao, ary ny marina dia amin'ireo fandaharana voalaza etsy ambony ireo dia tsy misy programa fanovana manakana ahy 10 minitra akory alohan'ny fivoahana sy fanjavonana.
Ratsy ny linux, tsy manana mpanonta mendrika.
Misy aminareo ve mahalala hoe aiza no distro kdenlive, open, sns afaka miasa amiko, nefa tsy midona?
Tena hanampy ahy tokoa izy ireo.
Toy izany ny zavatra, miditra eto aho mba hibolisatra sy hijerena ary rehefa mandeha tsara ny zava-drehetra dia mankaleo isika fa mandeha tsara, io no olombelona, ​​inona koa no sisa xD, tsy maintsy manao virtoaly foana isika ary miverina miverina amin'ny ny varavarankely
Trosa dia hoy izy:
Fanandramana Debian + KDE4. Toy ny landy.
Amin'ny fizara hafa, distro hafa misy fitsapana DE na WM (Opensuse, Fedora, Ubuntu, Arch + Openbox, fluxbox, Mate, LXDE, tsy haiko!)
Valiny amin'ny trosa
Hatramin'ny hareza dia tonga lafatra aho, efa nanandrana azy rehetra aho ary ity iray ity dia nahatonga ahy hitia
jhoed dia hoy izy:
Mitady vato iray distro stable sy birao amin'ny fomba mitovy aho.
Mamaly an'i jhoed
Nametraka lubuntu ny marina aho dia mankaleo aho fa tsy misy na inona na inona, heveriko fa ny linux no tsara indrindra misy, nandà betsaka tamin'ny windows vista nametraka azy toy ny enina aho, nitondra olana tamiko io dia faly foana aho miaraka amin'ny linux